Maxkamada Ciraaq Oo Amartay in la Xidho Saraakiishii Qabanqaabiyay Aftidii Kurdiyiinta. – Heemaal News Network
Maxkamada Ciraaq Oo Amartay in la Xidho Saraakiishii Qabanqaabiyay Aftidii Kurdiyiinta.
Maxkamadda fedaraalka dalka Ciraaq ayaa amar ku bixisay in la soo xiro saraakiisha Kurdiyiinta ee ku lugta lahaa aftidii madaxbanaanida ee bishii aanu soo dhaafnay ka dhacday gobolkaasi.
Amarka ay bixisay maxkamadda ayaa waxa soo hoos galaya xubnaha guddiga doorashada ee gobolka Kurdiyiinta.
Rai’sul wasaaraha dalka Ciraaq Haider al-Abadi ayaa bishii aanu soo dhaafnay waxa uu dalbaday in la joojiyo codaynat aftida muranka dhalisay .
Maxkamadda fedaraalka ee dalka Ciraaq ayaa waxa ay imika sheegtay in tillaabo dhanka sharciga ah laga qaadi doono saraakiisha Kurdiyiinta ee ku lugta lahaa qabashada aftidaasi.
Maxkamada ayaa sheegtay in iyada oo loo sii marayo xafiiska dacwad soo oogaha guud tillaabadaasi la qaadi doono.
Afhayeen u hadlay maxkamada oo lagu magacaabo Abdulstar Bayraqdar, ayaa sheegay in amarkan lagu soo xirayo saraakiishani uu ka dambeeyay ka dib markii golaha amniga qaranka ay ku doodeen in aftida ay ka soo horjeeday go’aan ay horey u gaartay maxkamada sare ee Fedaraalka.
Ka dib codeyntii dhacday 25 September ayaa saraakiisha Kurdiyiinta waxa ay sheegeen in aftida madaxbanaanida ay u codeeyeen 2.8 milyan oo ku nool seddexda gobol ee uu ka kooban yahay maamulka Kurdiyiinta Ciraaq.
Balse xukuumadda Ciraaq ayaa sheegtay in aysan aqoonsanayn natiijaddii ka soo baxday aftida madaxbanaanida gobolka waqooyiga Kurdiyiinta Ciraaq.
Dab ka Kacay Kaymo ku Yaala Maraykanka Oo Laga Dayrinayo.
Ciidamada Kurdiyiinta Oo Weerar Rogaal Celin ah ku Qaaday Ciidamada Ciraaq Ee ku Sugan Magaalada Kirkuuk
Maalmo uun ka dib markii ciidanka Ciraaq la wareegay gacan ku haynta goobo lagu muransanyahay, ayaa waxa ciidamada Kurdiyiinta iyo kuwa Ciraaq foodda isku dareen woqooyiga magaalada Kirkuuk. Wariye ka tirsan BBC-da oo goobta jooga […]
Kurdiyiinta Oo si Aqlabiyad Leh Ugu Codeeyay inay ka Go’aan Dalka Ciraq.
September 27, 2017 Caalamka
Kurdiyiinta ku nool Waqoyiga Ciraq ayaa afti laga qaaday waxa ay cod aqlabiyad leh ugu codeeyeen inay ka go’aan dalka Ciraq. Guddiga doorashada oo soo saaray natiijada aftida ayaa sheegay in boqolkiiba 92% oo ah […]
Dowlada Ciraaq Oo Wakhti kama Dambeys ah U Qabatay Cidamada Kurdiyiinta Ee Xooga ku Maamula Magalada Kirkuk.
Kurdiyiinta ku sugan woqooyiga dalka Ciraaq ayaa sheegaya in dowladda Ciqaar ay u qabatay tan iyo caawa saqdhaxe in ay ku soo wareejiyaan xarumaha milatari iyo wershadaha saliidda ee ku yaala magaalada lagu muransan yahay […]